Imizobo - Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 2)
I-Glimpse 0.2.0 ifikile njengogqibo lokugqibela lwefom ye-GIMP kunye nolona hlobo lubalaseleyo lokubandakanya iPhotoGIMP yomdibaniso.
U-Akira, umhleli wegraphic vector weLinux
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukukhutshwa kweenguqulelo zokuqala zika-Akira kwabhengezwa, esingumhleli wemizobo yevector egxile ...
Iidrive ze-NVIDIA 440.100 kunye ne-390.138 sele zikhutshiwe kwaye ziya kulungisa ezinye bugs
Kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo i-NVIDIA ikhuphe iinguqulelo ezintsha zabaqhubi bayo i-NVIDIA 440.100 (LTS) kunye ne-390.138 ...
Inguqulelo entsha yeKrita 4.3.0 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
Ukuphehlelelwa kweKrita 4.3.0 kusandula ukubhengezwa, okuza neziphuculo ezahlukeneyo kwizixhobo, iifilitha ezintsha kunye nezinye iindaba ...
I-GIMP 2.10.20 ifika ibonisa izixhobo zeqela kwi-hover kunye nokuphucula inkxaso yePSD
I-GIMP 2.10.20 ifikile iinguqu ezimbalwa kodwa ezibalulekileyo, ezinje ngomsebenzi obonisa amaqela ezixhobo xa ujikeleza ngaphezulu.
Ukukhutshwa kwenguqulelo entsha ye-Mir 1.7 ifika ukulungisa ezinye i-bugs
I-Mir yiseva yemizobo yeLinux ephuhliswe yiCanonical ukuze ithathe indawo yeX Window System ku-Ubuntu ...
Isebe elitsha elizinzileyo labaqhubi beNvidia 440.31 likhutshiwe
Isebe elitsha elizinzileyo labaqhubi babo beNvidia 440.31 lakhutshelwa uluntu ngokubanzi. Inguqulelo efika nezinye iindaba ...
I-GIMP 2.10.14 ngoku iyafumaneka ngokulungiswa kunye nezinye iindaba ezibalulekileyo
I-GIMP 2.10.14 ilapha ukulungisa iibugs kwaye igcine isoftware yomelele. Ikwaquka iindaba ezilungileyo.
Emva kweminyaka emi-3 kuza uhlobo olutsha lweLazPaint 7.0.5
Emva phantse kweminyaka emithathu yophuhliso, ukwaziswa kwenkqubo entsha edumileyo kwabhengezwa ...
I-Xrdesktop yiprojekhthi yenyani yenyani yokusebenzisa i-Gnome kunye ne KDE
Abaphuhlisi benkampani yeCollabora bazise iprojekti ye-xrdesktop, apho, ngenkxaso yeValve, ithala leencwadi liphuhliswa ...
I-Blender 2.80, ngoku uhlaziyo oluphambili "sisiqalo esitsha"
IBlender 2.80 ngoku iyafumaneka, inguqulelo entsha ebandakanya iindaba ezininzi ezinomdla ezifana ne-Eevee okanye izixhobo ezitsha.
IKrita 4.2.0 sele ikho ... okanye hayi. Kulungile iya kuba ngowuphi na umzuzu
IKrita 4.2.0 ikhutshiwe! ... okanye ubuncinci ukukhutshwa kwayo kubhengeziwe. Yonke into ilungile kwaye ukumiliselwa kwayo kusondele.
Kukho isicelo esitsha sokuzoba kwiLinux. Ibizwa ngokuba yiDrawing kwaye sele ifikelele kuguqulelo lwayo oluzinzileyo. Ixabiso?
Kulabo bangabasebenzisi be-ATI / AMD abalawuli bevidiyo okanye iprosesa ethile ye-AMD ene-GPU edityanisiweyo, uya kwazi ukuba i-AMD isasaza ...
Ngoku unokwenza Ubuntu 17.04 ujongeke Windows 10 ngokulula
Imeko ye-desktop ye-UKUI iya kwenza Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) ijongeke ngokufana Windows 10. Sikubonisa ukuba uyifaka njani i-UKUI kwaye isebenza njani.
IVivaldi ihlaziywa kwakhona kwaye isekwe kwiChromium 57.0.2987.138
IVivaldi ihlaziyiwe yohlobo lwe-1.8 kwaye, ukongeza ukulungiswa kweebugs ezininzi, isekwe kwiChromium 57.0.2987.138.
Isifundo esincinci sendlela yokufaka ingxelo yokugqibela ye-GIMP kwi-Ubuntu ngaphandle kwesidingo seenkqubo ezingaqhelekanga kunye neeplagi ezisemthethweni ...
Uyifaka njani i-GIMP 2.9, ingxelo yokugqibela kuphuhliso, ku-Ubuntu
Ngaba uyafuna ukuzama into eza kumhleli womfanekiso weGIMP? Kule posi sikubonisa ukuba uyifaka njani i-GIMP 2.9, ingxelo elandelayo eseza kuza.
IKrita 3.1.1 ngoku iyafumaneka kwiLinux, Mac nakwiWindows
IKrita 3.1.1 ngoku iyafumaneka, uhlaziyo olubandakanya ukulungiswa kwe-bug kunye nokuphuculwa kokuthembeka kwaye lolokuqala lufumaneka kwi-macOS.
Ungayiguqula njani i-Gimp kwi-Photoshop
Isifundo esincinci sokuguqula i-Ubuntu Gimp yethu ibe yi-Photoshop, ubuncinci ngokubonakala okufanayo ne-Photoshop okwangoku ...
Inqaku lengxoxo apho iiseva eziphambili zegrafikhi ezisebenza ngoku ku-Ubuntu kuxoxwa ngazo: xorg, wayland kunye mir.
Ungayenza njani ubungakanani kwakhona bezithombe kwi-Ubuntu
Isifundo esincinci sendlela yokwenza ubungakanani kwakhona beefoto ngobuninzi kubuntu bethu kwaye kungafuneki siyenze ifoto ngefoto ngenkcitho yexesha ...
Ungayitshintsha njani i-avatar yomsebenzisi ku-Ubuntu
Xa i-PC yethu kwabelwana ngayo ngabantu abaliqela, kunokuba ngumbono olungileyo ukusebenzisa umfanekiso owahlukileyo womsebenzisi ngamnye. Kulungile…
Khetha, isixhobo sokukhetha umbala kwiLinux
Ngaba ukhe wafuna ukwazi owona mbala ubonisiweyo kwikhompyuter yakho? Ewe kufuneka uzame isixhobo sePick.
imgmin, kunciphisa ubunzima beemifanekiso zeJPG
Ngaba unayo iifoto kunye nokwandiswa kwe-.jpg ongathanda ukunciphisa ubunzima bayo? Ukuba usebenzisa i-GNU / Linux une-Imgmin ekhoyo, isixhobo esisebenza ngeTheminali.
Ngaba awudinwanga kukuba unqunyelwe ekusebenziseni iGimp ukuhlela imifanekiso? Apha siza kukufundisa indlela yokusebenzisa i-Photoshop CC kwi-Ubuntu.
Umhleli wevidiyo osimahla kunye novulekileyo u-OpenShot ukhuphe i-beta entsha. I-OpenShot 2.0.7 beta 4 se…
Ubunye 5.3 ekugqibeleni buza kwiLinux
Sithetha ngokufumaneka kwangoko komhleli we-Unity 5.3 kwiLinux. Sibonisa ezinye zeendaba zayo kwaye sicacisa ukuba ungayifaka njani Ubuntu.